Insị na mpụga nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ iwu abụọ | Law & More B.V.
blog » Insịns na outs nke ụlọ ọrụ iwu abụọ
Insịns na outs nke ụlọ ọrụ iwu abụọ
Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ nwere ụkpụrụ bụ ụdị ụlọ ọrụ pụrụ iche nke nwere ike itinye na NV na BV (yana nkwekọrịta). A na-echekarị na nke a metụtara naanị ndị otu na-arụ ọrụ mba ụwa na akụkụ nke ọrụ ha na Netherlands. Otú ọ dị, nke a adịchaghị mkpa ịbụ ihe; usoro ihe owuwu ahụ nwere ike ibute ngwa ngwa karịa ka mmadụ ga-atụ anya ya. Ihe a ọ bụ ihe ekwesịrị izere ka ọ nwere uru ya? Isiokwu a na-atụle ins na outs nke ụlọ ọrụ iwu abụọ na-enyere gị aka nyocha nke ọma banyere mmetụta ya.
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ
E webatara ụlọ ọrụ iwu abụọ iwu na usoro iwu anyị n'ihi mmepe nke nwe oke n'etiti narị afọ gara aga. Ebe enwere otutu ndi nwere oke ego nke kwadoro ogologo oge, ọ bịara bụrụ ihe a na-ahụkarị (ọbụlagodi maka ego ezumike nka) itinye obere oge na ụlọ ọrụ. Dịka nke a dugara na itinye aka na obere, Nzukọ Ezumezu nke ndị na - ekenye ya (nke a 'GMS') enweghị ike ilekọta njikwa ahụ. Nke a mere ka onye omebe iwu iwebata ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ na 1970s: ụdị azụmahịa pụrụ iche nke a na-achọ nlekọta siri ike na nguzozi n'etiti ọrụ na isi obodo. Ebumnuche a ka a ga-enweta site na ime ka ọrụ na ike nke Supervisory Board (nke na-esote 'SB') na iwebata Kọmitii Ọrụ na ikike nke GMS.
Taa, mmepe a na nke oke ala ka bara uru. N'ihi na ọrụ nke ọtụtụ ndị na - ekenye oke na nnukwu ụlọ ọrụ na - agabiga, ọ nwere ike ime na obere ndị na - ekenye ndị ahịa na - ebute GMS ma nwee nnukwu ikike na njikwa. Oge dị mkpirikpi nke ndị na-eketa òkè na-agba ume ọhụụ oge dị mkpirikpi nke mbak ga-abawanye uru ngwa ngwa o kwere mee. Nke a bụ echiche dị warara maka ọdịmma nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ (dịka ndị ọrụ ya) na-erite uru n'ọhụụ ogologo oge. Koodu Gọọmentị Corporate na-ekwu maka 'ihe okike dị ogologo oge' na ọnọdụ a. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ nwere ọkwa abụọ ji arụ ọrụ ka bụ ụdị ụlọ ọrụ dị mkpa taa, nke na-ezube imezi ihe ndị metụtara ndị na-eme ya.
Kedu ụlọ ọrụ ndị tozuru maka usoro nhazi ahụ?
Iwu usoro iwu abụọ (nke a na-akpọkwa usoro nhazi ma ọ bụ 'nhazi' na Dutch) abụghị iwu mmanye ozugbo. Iwu ahụ chọrọ iwu nke ụlọ ọrụ ga-emerịrị tupu ngwa ahụ enwee ike ịbụ nke akwadoro mgbe oge ụfọdụ gasịrị (belụsọ enwere nnwere onwe, nke a ga-atụle n'okpuru). Edere ihe ndị a na ngalaba 2: 263 nke Dutch Civil Code ('DCC'):
The ụtụ isi ụlọ ọrụ ya na ndi edere ya na akwukwo nke tinyere ego edere opekempe ego nke Iwu Royal kpebiri (nke edoziri ugbu a € 16 nde). Nke a gụnyekwara mbak agbapụtara (ma ọ bụghị kagbuo) yana nchekwa niile zoro ezo dị ka egosiri na nkọwa nkọwa.
Companylọ ọrụ ahụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ dabere na ya, eguzobewo a Ọrụ Council dabere na iwu iwu.
Ọ dịkarịa ala ndị ọrụ 100 na Netherlands na-arụ ọrụ site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ya dabere. Eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ oge niile ma ọ bụ oge niile anaghị arụ ọrụ na nke a.
Kedu ụlọ ọrụ dabere?
Otu echiche dị mkpa site na ihe ndị a bụ ụlọ ọrụ dabere. Ọtụtụ mgbe enwere echiche na-ezighi ezi na iwu iwu ọkwa abụọ anaghị emetụta ụlọ ọrụ nne na nna, dịka ọmụmaatụ n'ihi na ọ bụghị ụlọ ọrụ nne na nna guzobere Council Council kama ọ bụ ụlọ ọrụ enyemaka. Ya mere, ọ dịkwa mkpa ịlele ma ọnọdụ ụfọdụ emezuru n'ihe gbasara ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'ime otu a. Ndị a nwere ike ịgụta dịka ụlọ ọrụ dabere (dịka edemede 2: 152/262 DCC) ma ọ bụrụ:
onye iwu nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ otu ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ dabere, naanị ma ọ bụ jikọrọ aka na maka akaụntụ ya ma ọ bụ nke aka ha, nye opekata mpe ọkara nke isi ego ahụ,
ụlọ ọrụ nke edebanye aha azụmaahịa na ndekọ azụmaahịa na nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dabere nwere ike zuru ezu dị ka onye mmekọ maka ndị ọzọ maka ụgwọ niile.
Ngwa afọ ofufo
N'ikpeazụ, ọ ga-ekwe omume iji tinye sistemụ okpukpu abụọ (zuru ezu ma ọ bụ mitigated) iji aka ya. N'okwu ahụ, naanị ihe nke abụọ achọrọ gbasara Council Council na-emetụta. Iwu usoro iwu abụọ ga-adaba ozugbo ejiri tinye ha na ngalaba mkpakọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ.
Guzobe nke ụlọ ọrụ iwu abụọ
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ zutere ihe ndị a edere n'elu, ọ tozuru oke iwu dị ka 'nnukwu ụlọ ọrụ'. A gha aghaghi ikwuputa nke a na ahia ahia n'ime onwa abuo mgbe GMS nakweere ihe omuma kwa afo. Emeghe aha a dị ka mmebi akụ na ụba. Ọzọkwa, ndị ọ bụla nwere mmasị na iwu nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ha debanye aha ha. Ọ bụrụ na ndebanye aha a abanyela na aha ahịa na-aga n'ihu ruo afọ atọ, usoro ihe owuwu ahụ metụtara. N'oge ahụ, ọ ga-abụrịrị na a gbanwere isiokwu ndị metụtara mkpakọrịta iji kwado ọchịchị a. Oge maka itinye nke iwu iwu abụọ anaghị amalite na-agba ọsọ ruo mgbe edere aha ahụ, ọbụlagodi na ahapụla ozi ahụ. Enwere ike ịkwụsị ndebanye aha na nwa oge ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ emezughị ihe ndị a chọrọ. Mgbe ụlọ ọrụ mara ọkwa na ọ na-ekwenye ọzọ, oge ahụ na-amalite site na mbido (belụsọ ma etinyere oge ahụ n'ụzọ ezighi ezi).
Hapụrụ (Eleghị anya)
Ikwupụta ihe ngosi anaghị emetụta n'ihe gbasara ịkwụsị kpamkpam. Ọ bụrụ na usoro ihe owuwu ahụ metụtara, nke a ga-akwụsị ịdị adị na-enweghị oge ịgba ọsọ. Ihe ndị a na-esote iwu:
Companylọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ dabere na ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke usoro ọchịchị ya zuru oke ma ọ bụ nke ebubere. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, a na-ahapụ ngalaba enyemaka ahụ ma ọ bụrụ na usoro mbadamba abụọ (mitigated) metụtara nne na nna, mana nke ọzọ anaghị eduga na ịhapụ nne na nna ahụ.
The ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ njikwa na ego na mba ụwa, ewezuga na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ otu na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị ọrụ na-abụghị Netherlands.
Otu ụlọ ọrụ nke opekata mpe ọkara nke isi obodo enyere so na a nkwukọrịta site na ọ dịkarịa ala ụlọ ọrụ iwu abụọ n'okpuru usoro usoro.
Lọ ọrụ ọrụ ahụ bụ mba ụwa.
Enwekwara ikike ma ọ bụ mebie usoro nchịkwa nke otu mba dị iche iche, nke SB anaghị enye ikike ịhọpụta ma ọ bụ ịchụpụ ndị otu njikwa. Ihe kpatara nke a bụ na ịdị n'otu na amụma dị n'etiti otu na ụlọ ọrụ nwere ọkwa abụọ dara ada. Nke a metụtara ma ọ bụrụ na otu n'ime ikpe ndị a bilitere:
Companylọ ọrụ ahụ bụ (i) ụlọ ọrụ ọkwa abụọ nke (ii) opekata mpe ọkara nke isi obodo enyere ka ejiri ụlọ ọrụ (Dutch ma ọ bụ ndị mba ọzọ) ma ọ bụ ụlọ ọrụ dabere na (iii) ọtụtụ n'ime otu 'ndị ọrụ na-arụ ọrụ na mpụga Netherlands.
Ọ dịkarịa ala ọkara nke ndị isi ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ nke ụlọ ọrụ abụọ nwere ọkwa na-ejide ụlọ ọrụ abụọ ma ọ bụ karịa n'okpuru otu arụkọ ọrụ ọnụ ndokwa (nhazi nkwado), ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ na mpụga Netherlands.
Ọ dịkarịa ala ọkara nke isi obodo enyere n'aka na-ejide ụlọ ọrụ nne na nna ma ọ bụ ụlọ ọrụ dabere na ya n'okpuru ndokwa mmekorita nke onwe ya bụ ụlọ ọrụ iwu abụọ.
Nsonaazụ usoro ọchịchị
Mgbe oge ahụ gwụrụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-agbanwe ihe ndị metụtara ya dịka usoro iwu si achịkwa usoro nhazi ọkwa abụọ (Nkeji edemede 2: 158-164 nke DCC maka NV na edemede 2: 268-2: 274 nke na DCC maka BV). Ulo oru abuo di iche na ulo oru ndi ozo na isi ihe ndia:
The iguzobe onodu nlekọta (ma ọ bụ nhazi ọkwa otu ọkwa dịka Nkeji edemede 2: 164a / 274a nke DCC) bụ iwu;
The A ga-enye SB ikike sara mbara na-efu ndị ike nke GMS. Dịka ọmụmaatụ, a ga-enye SB ikike ikike banyere mkpebi nchịkwa dị mkpa yana (n'okpuru ọchịchị zuru oke) ga-enwe ike ịhọpụta na ịchụpụ ndị nduzi.
The a na-ahọpụta ndị otu SB site na GMS mgbe SB họpụtara, nke otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị otu họpụtara site na Council Council. Enwere ike ịjụ nhọpụta ahụ site na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-anọchite opekata mpe otu ụzọ n'ụzọ atọ nke isi obodo enyere.
Ọchịchị ọchịchị rụrụ arụ?
Ike nke ndị obere, ndị na-eme ihe ike na naanị ndị na-etinye ego maka uru nwere ike ịkwụsị ọchịchị usoro. Nke a bụ n'ihi na SB, site na mgbatị nke ike ya, nwere ike ilekwasị anya n'ọtụtụ ọdịmma dị n'etiti mmasị ụlọ ọrụ, gụnyere mmasị nke onye nwe ya, nke na-erite uru nke ndị nwere oke ya yana ịga n'ihu nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọrụ na-enwetakwu mmetụta na amụma ụlọ ọrụ, n'ihi na ndị Ọrụ Council na-ahọpụta otu ụzọ n'ụzọ atọ nke SB.
Mmachibido njikwa ndị nwe ụlọ
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ iwu nke abụọ nwere ike ịbụ ọghọm ma ọ bụrụ na ọnọdụ bilitere nke na-agbadata n'omume ndị na-ekenye gị oge dị mkpirikpi. Nke a bụ n'ihi na ndị na - ekenye oke ego, bụ ndị meburu ụlọ ọrụ ahụ na mmetụta ha na ọhụụ ogologo oge (dịka, dịka ọmụmaatụ, na azụmaahịa ezinụlọ), na-ejedebe na njikwa ha site na usoro ọkwa ọkwa abụọ. Nke a nwekwara ike ime ka ụlọ ọrụ ahụ ghara ịdị mma na isi obodo ọzọ. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ iwu abụọ anaghị enwe ike iji ikike nke nhọpụta na nchụpụ - mmega ahụ kachasị nke njikwa a - yana (ọbụlagodi na ọchịchị mbata) iji gosipụta ikike veto na mkpebi nchịkwa dị mkpa . Ikike fọdụrụnụ nke nkwanye ma ọ bụ nkwenye na ohere nke ịchụpụ na obere oge bụ naanị ndò nke ihe a. Ọchịchọ nke usoro iwu abụọ tozuru oke dabere na ndị na-ekenye ndị ọzọ ụlọ ọrụ.
Usoro okike eji eme akwa
Ka o sina dị, ọ ga-ekwe omume ịme ndokwa ụfọdụ iji kwado ndị na-ekenye ụlọ ọrụ n'ime oke iwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume na isiokwu nke mkpakọrịta iji belata mmachi nke mkpebi nchịkwa dị mkpa site na SB, ọ ga-ekwe omume ịchọ nkwado nke ụlọ ọrụ ọzọ (dịka GMS) maka mkpebi ndị a. Maka nke a, a na-etinye iwu nkịtị maka ịmegharị isiokwu nke mkpakọrịta. E wezụga mgbanwe na edemede nke mkpakọrịta, enwere ike ịkọwapụta nkwekọrịta. Agbanyeghị, nke a abụghị ihe amamihe dị na ya n'ihi na anaghị amanye ya iwu na ụlọ ọrụ. Site na ịmegharị mmezi iwu kwadoro na iwu iwu abụọ, ọ ga-ekwe omume ịchọta ụzọ n'ime ọchịchị nke dabara ụlọ ọrụ ahụ, n'agbanyeghị ntinye iwu.
You ka nwere ajụjụ gbasara usoro ihe owuwu mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ma ọ bụ ị ga-achọ ndụmọdụ ahaziri ahazi na usoro ọchịchị? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na iwu ụlọ ọrụ ma nwee obi ụtọ inyere gị aka!
Previous Post Mkpebi mgbochi: Olee mgbe a ga-anabata ya?
Next Post Nlekọta nlekọta